Beaute Cafe ရဲ့ Target Trip ဖြစ်တဲ့ ဖူးခက်ခရီးစဥ်လေးက December နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ 2020 October လ မှ December လ အတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 2000 ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက် ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလမှာ Promotion လဲရှိလို့ လက်မှတ်တွေ အများကြီးရအောင် အတူတူကြိုးစားကြရအောင်နော်
New Skiin Skin Reborn Solution ရဲ့ Pattaya3Months Target Trip ??? September , October နှင့် November 2020 ၃လ အတွင်း New Skiin Supplement ဘူး 1000 ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားကမ်းခြေ သွားရောက်ခွင့် လက်မှတ် တစ်စောင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ? Target လေးပြည့်အောင် ကြိုးစားကြစို့နော် ❤
Better Skin Coffee Soap Scrub ရဲ့3Months Target Trip လေးမှ ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ချောချောချေတို့ရေ ❤ September 2020 မှ November 2020 အတွင်း Better Skin Soap အတုံး 5000 ရောင်းချသော Agent တိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားကမ်းခြေ သွားရောက်ခွင့် လက်မှတ် တစ်စောင် ရရှိပါမယ်နော် ☺️ ချောချောချေတို့ရဲ့ အစွမ်းကို ယုံကြည်ပြီးတော့ ဘယ်သူတွေက လက်မှတ်ဘယ်နှစောင်ရမလဲဆိုတာ စောင့်မျှော်နေပါတယ် ?
Beaute Cafe Target Trip က ဒီလ September နောက်ဆုံးနော် ? 2020 July လ မှ September လ အတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 2000 ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက် ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Target ပိတ်တော့မယ်ဆိုတော့ အခွင့်အရေးကိုလက်မလွှတ်သွားအောင် အတူတူကြိုးစားကြစို့ ?
New Skiin Foam Cleanser ရဲ့3Months Target Trip က ဒီလ August နောက်ဆုံးနော် ? 2020 June လ မှ August လအတွင်း New Skiin Foam Cleanser ဘူး 2000 ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Agent တိုင်းရရှိနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်လို့ ကြိုးစားကြမယ်နော် ?
Beaute Cafe အတွက် Target Trip လေးရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ကြနဲ့နော် ? 2020 July လ မှ September လ အတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 2000 ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက် ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Target တွေ ပြည့်အောင်ကြိုးစားပြီး တူတူအပမ်းဖြေကြရအောင်နော် ?
New Skiin Supplement ရဲ့ June, July, August ၃လ Target Trip ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ Pattaya ကမ်းခြေ အပမ်းဖြေ ခရီးစဥ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်. June, July, August ၃လအတွင်း Supplement ဘူး ၁၀၀၀ ရောင်းချတိုင်း အပမ်းဖြေ ခရီးစဥ် လက်မှတ်တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်. Covid အလွန်ကာလမှာ အပမ်းဖြေဖို့ အခုကတည်းက ကြိုးစားထားလိုက်ကြရအောင်နော်.
Better Skin Soap ရဲ့ June, July, August ၃လ Target Trip ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ Pattaya ကမ်းခြေ အပမ်းဖြေ ခရီးစဥ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်. June, July, August ၃လအတွင်း ဆပ်ပြာအတုံး ၅၀၀၀ ရောင်းချတိုင်း အပမ်းဖြေ ခရီးစဥ် လက်မှတ်တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်. Covid အလွန်ကာလမှာ အပမ်းဖြေဖို့ အခုကတည်းက ကြိုးစားထားလိုက်ကြရအောင်နော်.